warkii.com » Aqriso: Afarta qodob ee uu Mursal ‘u cuskaday xil ka qaadista’ R/W KHEYRE
Aqriso: Afarta qodob ee uu Mursal ‘u cuskaday xil ka qaadista’ R/W KHEYRE
Muqdisho (warkii.com) – Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan, Guddoomiyaha Golaha Shacabka ayaa maanta si lama filaan ah u shaaciyey in kalsoonidii lagala noqday Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Xasan Cali Kheyre.
Sida ay ogaatay warkii.com, Guddoomiye Mursal iyo xildhibaanada golaha ayaa Afar qoddob u cuskaday xil ka qaadista ay maanta ku sameeyeen Xasan Cali Kheyre iyo xukuumadiisa.
Guddoonka iyo qaar kamid ah xildhibaanada golaha ayaa ku doodaya in xukuumadda uu hogaamiyo Kheyre ay gebi ahaanba ku fashilantay amniga iyo arrimihii federaalka, oo maalmihii u dambeeyay laga gaaray heshiis is-faham.
Sidoo kale xukuumaddii Kheyre ayaa lagu haystaa inay gebi ahaanba ku fashilantay hanaanka doorashooyinka ee 2020/2021 iyo weliba dhameystirka Dastuurka dalka oo weli qabyo ah.
Afartaasi qoddob waa kuwa ay Guddoonka iyo xildhibaanadu ku eedeyeen xukuumaddii Kheyre, isla markaana ay daaqada uga saareen wallow la rumeysan yahay in arrintaasi salka ku hayso khilaafka ka dhex qarxay Farmaajo iyo Kheyre.
Kheyre iyo Farmaajo ayaa isku fahmi waayay nooca doorasho ee dalka ka qabsoomeysa marka la gaaro xiliga ay dalka ka qabsoomi laheyd, halka uu Farmaajo wato qorshe kaasi ka duwan oo muddo kororsi ah.
Xilka ka qaadista Baarlamaanka iyo ayidaada Farmaajo ayaa muuqata mid bilow u ah qorshaha Villa Somalia ee muddo kororsiga, taasi oo hore looga digay.